အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# တိုင် အတိတ် / တိုင် နိမိတ်Published August 18, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီ ပို့စ်လေးကတော့ သူ့ရှေ့က “ကောလာဟလ” ဆောင်းပါးလေးရဲ့ “အဆက်” လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့လာနေကြသူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
“ကောလာဟလ” ဆောင်းပါးမှာ နေ့တစ်နေ့ခြင်းစီအတွက် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာတိုင်စဉ် (၇)ခု ဇယားလေးကို ပြထားပါတယ်။ သတင်းစကား တစ်ခုကို ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအချိန်နာရီမှာ ကျရောက်နေတဲ့ “အခါတိုင်” အပေါ်မှာ လိုက်ပြီး “တိုင်အတိတ်/တိုင်နိမိတ်” ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းစကား (ကောလာဟလ)ဟာ အဲဒီအချိန်တိုင်ရဲ့ “အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်” တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် ဒါဟာ “နိမိတ်” မှန်နေပြီ (တနည်း) “ဆန်း” ၀င်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို နိမိတ်မှန် / ဆန်းမှန် နေရင် ဒီသတင်း စကား ဟုတ်၏ / မဟုတ်၏ ကို တွက်ချက်ရာမှာ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေကို ပိုပြီး ရနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့က ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့“ကောလာဟလ”မှာ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က “ဗုံးပေါက်ကွဲမှု” သတင်းကို မှန်/မမှန် ဆုံးဖြတ်တဲ့ နမူနာလေးကို ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ညနေ (၃)နာရီ ခွဲ ဖြစ်လေတော့ “စနေအခါ/စနေတိုင်” ကို ရပါတယ်။ “စနေတိုင်” ရဲ့ တိုင်အတိတ်/ တိုင်နိမိတ် ကလည်း “ထောင်၊ ဆေးရုံ၊ သုဿာန်၊ တရားရုံး” စသည်များနှင့် ပတ်သတ်နေလို့ လက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး “ဆန်း” ၀င်နေတာကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုပြီး ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာ” ကို လေ့လာခါစ, သူများ အထောက်အကူရနိုင်အောင် “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာတိုင်” တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ “တိုင် အတိတ်/တိုင် နိမိတ်” များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	# အင်တူလက်မျှ နဂိုပPublished February 11, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့ရိုးရာတွေထဲမှာ နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိန်းဂဏန်း တွေကို မှတ်သားတဲ့နေရာမှာ “လင်္ကာ” လေးတွေနဲ့ မှတ်သားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ “ဥသြအော်မည်၊ ကုန်းဘောင်တည်” ဆိုတာ ၁၁၁၅ ခုနှစ်မှာ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို စတင်တည်ထောင် ခဲ့တာကို မှတ်သားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
“လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ၊ ပုဂံဘုရားပေါင်း” ဆိုပြီး ပုဂံပြည်မှာရှိခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုးပေါင်းဟာ ၄၄၄၆၇၃၃ခု ရှိတယ်ဆိုတာကို လင်္ကာနဲ့မှတ်သားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဦးကောင်းလိမ်ထုတ်၊ မင်းဆက်ပြုတ်”ဆိုပြီးတော့လည်း ၁၂၄၇ ခုနှစ်မှာ သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီး မြန်မာ့ထီးနန်းဆက် ပျက်သုန်းသွားတာကို မှတ်သားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ဖို့-
စနေ (တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န)ဆိုရင် (၇)ဂဏန်း ဆိုတာတော့ အခြေခံအနေနဲ့ သိထားရပါမယ်။
ဒီလိုဘဲ မြန်မာ့ဆေးပညာ နဲ့ ဗေဒင်ပညာတွေမှာလည်း ကိန်းဂဏန်းတွေကို လင်္ကာတွေနဲ့ မှတ်သားကြပါတယ်။ “အောင်၊လံ၊ထူ၊စစ်၊သူ၊ကြီး၊ပွဲ” ဆိုတာ မဟာဘုတ်ချတဲ့ လင်္ကာပါ။ “စ၊ သာ၊ ရွှေ၊ ကူ၊ အင်း၊ ဝ၊ သူ၊ ဆန်၊ ဖြူ၊ တ၊ တင်း၊ ပေး” ဆိုတာ နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ ရာသီခွင်တွေရဲ့ အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်တွေကို မှတ်သားတာပါ။
မြန်မာ့ဗေဒင်ပညာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာကျပြန်တော့ လင်္ကာတွေနဲ့ ချည်းသာ မှတ်သားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ အချို့လင်္ကာတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်ဖော်လို့ မရသေးပါဘူး။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာဟာ အပေါ်ယံကြည့်ရင် လွယ်သယောင်နဲ့ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာတစ်ခုတည်း သာမက မြန်မာ့ဆေးပညာ၊ အဂ္ဂိရတ်ပညာ၊ အင်းပညာတို့ထိအောင် ပါဝင်ပတ်သတ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ပညာရှင်တွေကတော့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာဟာ “ထွက်ရပ်လမ်း” ထိအောင် ပေါက်မြောက်နိုင်တယ် လို့လည်း ယုံကြည် နေကြပါတယ်။
အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ တိကျမှန်ကန်အောင် ပြောနိုင်တဲ့ နည်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလေးတွေကိုလည်း လင်္ကာလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတာပါဘဲ။ အဲဒီအထဲက “အင်တူလက်မျှ၊ နဂိုပ” ဆိုတဲ့ လင်္ကာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ “အင်”ဆိုတာ တနင်္ဂနွေ၊ “တူ”ဆိုတာ စနေ၊ “လက်”ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟူး၊ “မျှ” ဆိုတာ ကြာသပတေး ပေါ့။
ဒီ လင်္ကာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တနင်္ဂနွေ၊ စနေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး ဆိုတဲ့ နေ့နံတွေဟာ “သူ့နဂိုအတိုင်းဘဲ” ရှိမြဲအတိုင်းဘဲ။ မရွေ့ပြောင်းဘူး၊ မလှုပ်ရှားဘူး၊ တည်ငြိမ်နေတယ် လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ “နေ့ နဲ့ အခါ” ဆိုပြီး (၂)မျိုးရှိပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့မှာ နေ့ပိုင်းမှာ အခါ (၈)ပိုင်း၊ ညပိုင်းမှာ အခါ(၈)ပိုင်းစီ ရှိပါတယ်။ နံနက် (၆) နာရီ ကနေ၊ ညနေ (၆)နာရီ အတွင်း အခါ(၈)ပိုင်း ပိုင်းလိုက်တော့ တစ်ပိုင်းကို တစ်နာရီခွဲရပါတယ်။ ညပိုင်းမှာလည်း ညနေ(၆)နာရီကနေ၊ နံနက် (၆)နာရီအတွင်း အခါ(၈)ပိုင်း ပိုင်းလိုက်ပြန်တော့ တစ်ပိုင်းကို တစ်နာရီခွဲရပါတယ်။ အဲဒီတစ်နာရီခွဲစီကို “သူရဇ္ဇ ၊ သောကြ ၊ ဗုဒ္ဓ ၊ စနြေ္ဒာ ၊ သောရီ ၊ ဂုရု ၊ ဘောမ” ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးကို နေ့အစဉ်အလိုက် အတိုင်း ချသွားရင် အင်္ဂဝိဇ္ဇာအခါတွေကို ရပါတယ်။ လင်္ကာမှာပါတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေက -
သူရဇ္ဇ ဆိုတာ တနင်္ဂနွေ (၁)ဂဏန်း
သောကြ ဆိုတာ သောကြာ (၆)ဂဏန်း
ဗုဒ္ဓ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟူး (၄)ဂဏန်း
စနြေ္ဒာ ဆိုတာ တနင်္လာ (၂)ဂဏန်း
သောရီ ဆိုတာ စနေ (ဝ)ဂဏန်း
ဂုရု ဆိုတာ ကြာသပတေး (၅)ဂဏန်း
ဘောမ ဆိုတာ အင်္ဂါ (၃)ဂဏန်း
အဲဒီတော့ နေ့တစ်နေ့မှာ ရှိတဲ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာ အခါတွေ ရှိနေပုံကို ဇယားလေးနဲ့ ကြည့်ရအောင်။
၆းဝဝ မှ ၇း၃ဝ
၇း၃ဝ မှ ၉းဝဝ
၉းဝဝ မှ ၁ဝး၃ဝ
၁ဝး၃ဝ မှ ၁၂းဝဝ
၁၂းဝဝ မှ ၁း၃ဝ
၁း၃ဝ မှ ၃းဝဝ
၃းဝဝ မှ ၄း၃ဝ
၄း၃ဝ မှ ၆းဝဝ
ဒီဇယားလေးကို သိရင် အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာကို အသုံးပြုပြီး မေးခွန်းတစ်ချို့တွေကို ဖြေနိုင်ပါပြီ။ “အင်၊ တူ၊ လက်၊ မျှ ၊ နဂိုပ” ဆိုတဲ့ တနင်္ဂနွေ၊ စနေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ နဲ့ ကြာသပတေး (၄)မျိုးဟာ “နေ့ နဲ့ အခါ” နှစ်ခု တွဲရက်ဖြစ်နေရင် အဲဒီ အချိန်မှာ လှုပ်ရှားခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ မအောင်မြင်ဘူး၊ မဖြစ်မြောက်ဘူးလို့ ဟောနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လယ် (၁)နာရီလောက်မှာ လူတစ်ယောက်က သူနိုင်ငံခြားကို သွားဖြစ်မလားလို့ မေးရင် တနင်္ဂနွေနေ့ (သောရီ)စနေအခါ ဖြစ်နေတော့ “အင် တူ” ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုံးဝမသွားဖြစ်ဘူး လို့ ယတိပြတ်ဟောချလိုက်ပါ။ လုံးဝမမှားစေရဘူး။ သူအနည်းဆုံး (၆)လလောက်အတွင်း နိုင်ငံခြားကို မသွားဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခရီးသွားဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးမှ ဆတ်ဆော့ပြီး ဗေဒင်မေးလိုက်လို့ “နေ့နဲ့အခါ” ဟာ အင်တူလက်မျှ အချိန် ဖြစ်နေရင်လည်း ဒီခရီးဟာ လုံးဝ မသွားဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဝယ်ပြီးသားလက်မှတ် ဆုံးလိမ့်မယ်လို့ ရဲရဲပြောလိုက်ပါ။ မမှားစေရပါဘူး။ အာမခံပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁ဝ)နှစ်ကျော်လောက်က ကျွန်တော် ဗေဒင်ပညာနဲ့ အသက်မမွေးခင် ဗေဒင်ကို အပျော်တမ်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်(ဗေဒင်ဆရာမဟုတ်)နဲ့ လမ်းမှာတွေ့ရင်း စကား စမည်ပြောကြတော့ သူမနက်ဖြန်ခါကို မန္တလေးကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရမ်း Crazy ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တော့ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တာ “အင်တူ၊လက်မျှ” ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ဆရာ့ကို “ဆရာ- မနက်ဖြန် ဆရာတို့ရဲ့ ခရီးစဉ် ပျက်လိမ့်မယ်” လို့ ပြောချလိုက်ပါတယ်။ ဆရာက သူ့အိတ်ထဲက လက်မှတ်နှစ်စောင်ထုတ်ပြပြီး “ဟေ့ကောင်၊ ဒီမှာ လတ်မှတ်တောင် ဝယ်ပြီးပြီးကွ ” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က “အဲဒါဆို ဆရာ့လတ်မှတ်တွေ ဆုံးပြီဆရာ” လို့ ခပ်ရဲရဲ ပြောချလိုက်တော့ ဆရာက မယုံကြည်တဲ့ အမူအရာနဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံးလုပ် နေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းခွဲသွားပြီး နောက်နေ့ ညနေပိုင်းလောက်မှာ ဆရာ့ဆီက ဖုန်းလာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူနဲ့အတူသွားမယ့် မိတ်ဆွေရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ရုတ်တရက် ဆေးရုံတင်လိုက်ရလို့ ခရီးစဉ် ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။ “ဟေ့ကောင် , မင်း ဟုတ်လှချည်လား” လို့ ချီးမွမ်းလိုက်တာကိုတော့ မကြွားချင်ပေမယ့် ကြွားလိုက်ရပါဦးမယ်။ ပြောချင်တာကတော့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဟောကွက်ကလေး တွေကိုပါ။ ဘာမွေးနေ့သက္ကရာဇ်၊ ဘာ ဘောပင်၊စာရွက်မှ မပါဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြောနိုင်တာကို ပြောချင်တာပါ။
ဒီ “အင်တူလက်မျှ”လေးကို သုံးပြီး – တနင်္ဂနွေနေ့ – စနေအခါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးအခါ နဲ့ ကြာသပတေးအခါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ – တနင်္ဂနွေအခါ၊ စနေ အခါ၊ ကြာသပတေးအခါ။ ကြာသပတေးနေ့ – တနင်္ဂနွေ အခါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး အခါ၊စနေအခါ။ စနေနေ့ – တနင်္ဂနွေအခါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး အခါ၊ ကြာသပတေးအခါ တွေမှာ မေးလာတဲ့ ……
ခရီးကိစ္စ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ၊ အပြောင်းအလဲ ကိစ္စတွေကို မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ ဟောနိုင်ပါတယ်။ ချဲ့ထွင်ဟောချင်ရင် ရာထူးတက်မလားမတက်ဘူးလား၊ အိမ်ထောင်ကွဲမလားမကွဲဘူးလား၊ အိမ်ပြောင်းရ မလားမပြောင်းရဘူးလားဆိုတာတွေပါ ဟောနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာက အဲဒီ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြာမှာလည်း ဆိုတာပါဘဲ။ အဲဒါက အခြေအနေအပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ခရီးဆိုရင်တော့ (၆)လလောက်အတွင်း သွားဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းခရီးဆိုရင် အနည်းဆုံး (၁)လအတွင်း မသွားဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေလို့ ကွဲချင်လို့မေးရင် အနည်းဆုံး (၁)နှစ်အတွင်းတော့ မကွဲ နိုင်သေးပါဘူး။ ရာထူးတက်မတက်မေးရင်လည်း (၆)လ ကနေ (၁)နှစ်အတွင်း မတက်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါတွေက အတွေ့အကြုံနဲ့ ဉာဏ်ထုတ်တတ်မှုအပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြပါဦးမယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ (သြစတေလျှ)ကို အပြီးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်။ သူဘယ်တော့လောက် ထွက်ရမလဲ မေးဘူးတယ်။ သူမေးတဲ့ အချိန်မှာ “အင်တူလက်မျှ” ဖြစ်နေလို့ မသွားဖြစ်သေးဘူး ပြောလိုက်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက် (၃)လလောက်မှာ ထပ်မေးတယ်။ “အင်တူလက်မျှ” ပါဘဲ။ နောက်(၄)လလောက်မှာ ထပ်မေးတယ်။ “အင်တူလက်မျှ” ဘဲ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က (အတွေ့အကြုံအရ) လုံးဝမထွက်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘဲ ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ မှန်ပါတယ်။ အခုဆို (၁ဝ)နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ သူ, ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း သြစတေလျှနိုင်ငံမှာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံခြားသားတွေကို ကန့်သတ်တဲ့ ဥပဒေအသစ်ထွက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ကြိုးစားလို့မရတဲ့အတွက် သူ လက်လျှော့သွားရပါတော့တယ်။
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဟာ တွက်ရတာ လွယ်ကူမြန်ဆန်သလောက် အမှန်များပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာ အများဆုံးတွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အဖြေကို သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာဟာ သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ လက်ဝါးကို ဖြန့်ကြည့်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇာတာခွင်ကြီးချကြည့်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားဖြစ်မလား၊ မသွားဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာကို ပြောပြဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါမျိုးကိစ္စမှာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာက အေးအေးဆေးဆေးဘဲ။ နာရီကို တစ်ချက်ကောက်ကြည့်လိုက်ပြီး ခရီးသွားဖြစ်မလား၊ မဖြစ်ဘူးလား။ မနက်ဖြန်ဘောလုံးပွဲမှာ မန်ယူနိုင်မလား၊ ချယ်ဆီးနိုင်မလား။ ပြောနိုင်တယ်။ အိုဘားမားနိုင်မလား၊ မက်ကိန်းနိုင်မလား။ ဒါလည်း လွယ်လွယ်လေးဘဲ။ သူတို့မွေးနေ့တွေသိစရာမလိုပါဘူး။ နာမည်သိရင် ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး မွေးနေ့၊ နေ့နံ၊ နာမည် ဘာတစ်ခုမှ မသိရရင်လည်း အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ ဟောလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
အကြွေးပြန်ရမလားမရဘူးလား၊ ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရင် အောင်မြင်မလား၊ ရာထူးတက်မလား၊ အရောင်းအဝယ် ရှုံးမလားမြတ်မလား၊ ဒီကုန်ပစ္စည်း လှောင်သင့်သလား၊ အမှုအခင်းမှာ အနိုင်ရမလား၊ ဒီလူနဲ့တွဲလုပ်သင့်လား၊ ဒီလူနဲ့လက်ထပ်သင့်သလား၊ ဒီအိမ်ခြံမြေ၊ အခန်းကို ဝယ်သင့်သလား။ ဒီပစ္စည်း ဝယ်သင့်သလား။ အတုလား၊ အစစ်လား။ အရှုပ်အရှင်း ရှိသလား။ ဒီလူကို ငွေချေးသင့်သလား။ လူနာ ပြန်ကျန်းမာလာမလား၊ နာတာရှည်ဖြစ်နေမလား၊ နောက်ဆုံး သေမလား၊ရှင်မလား ဆိုတာမျိုးက အစ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးကိုမဆို ဖြေနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး (၈၅)% မှန်ရပါမယ်။
ဗေဒင်ပညာကို ဝါသနာပါပြီး အခုမှ စတင် သင်ယူလိုသူများအတွက် ရှေ့လပိုင်းလောက်မှာ မဟာဘုတ်၊ အယူတော်မင်္ဂလာပညာ၊ မြန်မာ့ဟူးရားဗေဒင်(အင်္ဂဝိဇ္ဇာ နှင့် မဟာကာလ)၊ အရှေ့တိုင်း ဟူးရား ဗေဒင်၊ အနောက်တိုင်းဟူးရားဗေဒင်၊ တားရော့သင်္ချာဗေဒ(Taro-Numerology) တွေကို သင်ခန်းစာအစီအစဉ်နဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ ကဏ္ဍတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး အခန်းဆက် သင်ကြားပြသ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged ingaweikza, Myanmar Astrology, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, အင်တူလက်မျှ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |5Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,620)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,346)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,015)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,045)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,357)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,183)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,696)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,734)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,394)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,149)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,398)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,022)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,743)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,742)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,289)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,772)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,148)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,084)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,036)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !